Seddax Dhaqaale ee Khibradaha Cadawga, Diiwaangelinta iyo Dhulka Kirada - Kicinta Kowaad - Geofumadas
Seddax Dhaqaale ee Khibradaha Qaadida, Diiwaangelinta iyo Dhulka Kirada - Hantidii Hore
Oktoobar, 2015 cadastre
Marka labaad, ee saddexda maalmood ee ku lugta leh maalintaas oo lagu qabtay mashruuca Koonfurta-Koonfurta Caalamiga ah ee Iskuduwaha, ee Granada, Nicaragua. Halkan qiimeyntayda hordhaca ah.
Ku saabsan meesha
Shaki la'aan, kuwa aan ka soo xigan Nicaragua, waayo-aragnimada bay'adu waxay leedahay saamayn aad u sareysa. Heerkulka iyo dhididka si aad ujirto meel ka baxsan hawo qaboojinta waa waalan, laakiin meesha ayaa si fudud u roon.
Granada waxaa lagu aasaasay 1524 oo ku taal Francisco Hernández de Córdoba. Waa magaalada ugu da'da weyn ee Nicaragua iyo mid ka mid ah magaalooyinka ugu horeeya ee ku yaala dhul-beereedka Mareykanka. Si ka duwan dadka kale kuwaas oo ku andacooday isku mid, magaalada Granada may ahayn oo kaliya dejinta ee Fatxi, laakiin sidoo kale magaalada ka diiwaan gashan diiwaanka rasmiga ah ee Crown ee Aragon iyo boqortooyada Castile ee Spain.
Xaaladaha amniga bulshada, ixtiraamkayga. Dhowr saacadood oo loogu talagalay wakhtiga firaaqada ah, si uu u nuugo wax ka badan faraha. Jacaylka qiimaha taariikhiga iyo dhaqanka, sida qormo gaar ah oo gabaygan ah qaybta firaaqada.
Habka iyo maalinta
Aad u macquul ah oo shaqeynaya intii suurtagal ah. Inkasta oo intaa badani ku xiran tahay xirfada iyo qadarinta dhexdhexaadiyaha. Waxyaabaha ku saabsan Meelaha Furan, oo aad ka wadaagi karto mowduucyo gaar ah oo leh kuwa ku soo biira albaabbada; inkastoo maadooyinka aan arkay waxaan leeyahay fikradda ah inay noqdaan kuwo ku celceliya marka la eego kuwii hore.
qaab muxaadarooyin iyo shirarka waxaa lagu dheelitiri, haddii xoogaa dhagan waqtiyada halkaas oo aanay jirin meel ku filan laga fekerayo ama habaynta -entendible-. Maqaalkan waxaa ka mid ah ka qaybgalayaasha Guatemala, Mexico, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Dominican Republic, Costa Rica, Colombia, Peru, Uruguay, Macedonia, Mareykanka iyo laga yaabee lammaane badan oo aan illoobo hadda.
Maalinta ugu horreysa waxay ku dulqoraysaa bandhigyo caadi ah iyo soo dhaweyn badan oo waddanka ah oo si cad u qeexaya habka madaxweynenimada.
Laga soo bilaabo wadahadallada furaha ah; Soo bandhigida Diego Erba, "Muhiimadda Macluumaadka Cadowga ee Isukeenista" waa mid aan muuqan oo hodan ah garaaf ahaan; Ka sokow dareenkiisa wanaagsan ee kaftanka ah, gabagabada uu bixiyay bilowgii waa dhiirrigelin.
Victor Endo wuxuu muujiyay waaya-aragnimooyinka ku-meel-gaadhka caalamiga ah.
Darío Gómez Iskuduwaha Dhexdhexaadinta iyo Cadastare
Maalintii ugu horraysay dulucda ugu weyn ayaa habab la nidaamiyo, maalintii labaad ee casriyeynta iyo is-dhexgalka ee diiwaanka iyo cadastre oo berrina waxay ahaan doonaan kormeerka iyo qiimeynta barnaamijyada maamulka dalka. Halkan waxay sidoo kale jiri doona bandhigyo iyo Tilmaamaha Voluntary DAWLADDAHA in Haysashada Dhulka ee Latin America by Javier Molina.
Inkasta oo ay jirto hanti soo bandhigid iyo is dhaafsi, ka dib markii ay ka qaybgaleen laba dhacdo hore, waan tilmaami karaa arrimahan soo socda oo la hagaajin karo:
Ku dhiirri geli maareynta aqooneed ee farsamada. Qaar yar ayaa fikrad ka haysta habka nidaaminta dhammaan khibradaha la wadaago, sida loo galo, sida dib loogu soo celiyo iyo sida loo cesho aqoontaas; Dhab ahaan shuruudahan oo kale ah dimoqraadiyeynta aqoonta ayaa ku jirta heerarka hay'adaha dawliga ah.
Xitaa masayrka aqoonta ayaa weli la ogaanayaa. Qaar ka mid ah waraaqaha ayaa u muuqda inay u yimaadeen inay wadaagaan waayo-aragnimada wanaagsan, iyo in ka badan hal, iyaga oo muujinaya guusha gaar ah ee waddanka, mashruuca ama xataa la taliye gaar ah. In kasta oo laga bilaabo halkii ugu horeysay waxaad arki kartaa horumar ku wajahan arrintan.
Khayraadka aqoonta, saboolnimada ee go'aannada. Wadada dhex mara laamaha ayaa wali la ogaadaa, marka la eego tikniyoolajiyada, habka, sixirka suurta galka ah iyo dareenka ah in waxa u adeegay mid kale ay faa iido ii leedahay '' laakiin kiiskoodu wuu ka duwan yahay '. Weli su’aal ayaa laga qabaa haddii dhibaatada dhab ahaantii laga fahmay meesha ay ka timid. DHAMMAAN dhibaatooyinka diiwaangelinta ee ku jirta macnaha guud waa isku mid, DHAMMAAN dhibaatooyinka naxdinta leh ee halkan ku yaal waa isku mid; kala duwanaanshuhu waa siyaado, laakiin dhibaatadu waa isku mid. Dabcan, xalka ayaa gaar u ah dal kasta waxayna leeyihiin heerar kaladuwan oo horumar ah, laakiin uma arko aragti kama dambeys ah oo ku saleysan mabaadi'da xallinta oo si DHAMMAAN u siman oo aan ku mashquulin dib u soo kabashada.
Ma jiro qaab-hawleed kama dambeys ah. Anigu waxaan arkayaa aragti aan kala go 'lahayn waxa badeecadda ugu dambeysa ay tahay. Waxaan u maleynayaa in aysan jirin waraaqo sax ah, kuwaas oo intooda badan laga soo qaadan karo golaha dhammaadka dhacdooyinka. Qeybaha sida:
- Diiwaangelinta, cadastareerka iyo isdhexgalkeeda lama dhammeeyo, waxay kaliya oo macnaheedu tahay in kor loogu qaado horumarinta iyo daryeelka dadka isticmaala dhammaadka.
- Tiknoolajiyada ugu casriga ahi ma ahan kuwo degdeg ah, habka caadiga ah ee nidaamka (xitaa warqad).
- Casriyeynta dejinta waxaa loo samayn karaa maquila waana mid fudud; helitaanka nidaamka iyo isbeddelka dhaqanka ee dadka isticmaala hawlgalka joogtada ah waa caqabadda ay lagama maarmaan u tahay maalgashiga.
- Is-dhexgalka diiwaan-gelinta-cadastre kuma jiri karto isbedelka sharciga, xitaa nidaamka. Laakiin waxaa jira isbeddellada caalamiga ah u leeyihiin in ay dib ama ugu yaraan la Colnimo diyaariyey, sida xoojinta dhinaca hay'ad normadora sida dalad, kor u xogta aasaasiga ah by dawladaha hoose, xariirta by users ku soo laabtay ee dhiirigelinta sida dhimista bixinta canshuuraha, isdhexgalinta heerarka caalamiga ah ee maamulka ee xuquuqda hantida.
Qaybteena, waa qirasho ah Maxkamadda Sare iyo Xafiiska Qareenka ee Jamhuuriyadda Comandante Ortega, oo loogu talagalay ururka iyo diiradda munaasabadda. Ka qaybgalayaasha, hambalyo u dirista loo doortay inay halkaan yimaaddaan, mahadnaq u ah in ay wadaagaan aqoon aad u badan meelaha kala duwan. Bangiga Adduunka iyo FAO, bravo! si loo dhiirrigeliyo tallaabadaas oo loogu talagalay maamulka joogtada ah ee aqoonta; laakiin sidoo kale caqabadaha talaabooyinka soo socda si looga fogaado qaabka fudud ee wejiyada cusub si loo sii wado wax badan oo isku mid ah.
Post Previous«Previous News Bentley Newsletter Latin America
Post Next 5 Koorasyo ​​Online ah oo loogu talagalay Cadastre - aad u xiiso badanNext »